आउन त आउँछ होली यी पहाडहरु छिचोलेर पनि । यतै पनि जम्थ्यो होली । होरी आउँथ्यो हाम्रो बैंस र वसन्तसँगै । चीर पोलेको खरानी उडाइन्थ्यो, धुस्रोफुस्रो नेपाली रंग । रंग भएपछि रंग जे भएपनि हुन्छ । उमंग भएपछि सर्वत्र रंग हुन्छ । फाग गाइन्थ्यो चोर औंलो ठड्याउँदै, विशुद्ध नेपाली मन । अहिले युग बदलियो । युगसँग र्याङ्ठ्याङ मिलाउने क्रममा छौं हामी । अग्रगामी बाटामा उछिनपाछिनमा छौं हामी ।
होली अर्थात् होरी आयो । धूलाम्य छन् बस्ती र बाटाहरु । हाम्रो होलीले फागुमा रंग उडाउँछ । हाम्रो विकासले होलीपछि धूलो उडाउँछ । हाम्रो विकासले बर्खामा गाउँ बगाउँछ । विकास त फुल्नु र हाँस्नु हो भन्थ्यौं किन रmवाउँछ ? किन वैलाउँछ ? हामी हाम्रो हाँसो र गालाको लाली खोजी रहेछौं ।
प्रेममिलनको पर्व हो होली । शान्ति र मनवताको सन्देश हो होली । बलमिच्याइ चलिरहेछ संसारमा । शस्त्रास्त्रका होड चलिरहेछन् । युद्धका उन्मादहरु अट्टहास गरिरहेछन् । बम, बारुद पड्किरहेछन् मान्छेहरुका बस्तीमा । तेरो र मेरोको हानथापमा हाम्राहरु मरिरहेछन् । के विज्ञानको प्रयोग ध्वंसका लागि हो ? शान्ति, सृजना, मानवता र विश्वबन्धुत्वका लागि विज्ञानको उपयोग गर्नु पर्दैन ? हे भगवन्, नीलकण्ठ ! प्रकट भएर मान्छेले बनाएको यस कालकूटलाई पिइदेऊ ।